10 Charming Castles In France By Train | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Charming Castles In France By Train
Ingaba kufana ehamba ngololiwe? Ingaba ngathi ndibona iinqaba emangalisayo kumazwe afana France? Ukuba kunjalo, ke ufikelele indawo ekunene. Oko kungenxa yokuba eli nqaku “10 Charming Castles In France By Train” uya kukunika uluhlu bokuphela zakhe ezinde kakhulu umtsalane abalishumi France. Yintoni egqithisile, siza kukuxelela indlela yokufikelela kuzo ngololiwe!
Chateau of Chenonceau i omnye mpela kwabanye abantu njengoko balakha phezu iziseko selitye lokusila kwi 16th ngekhulu. Ungakwazi lula ukufikelela kuyo nge uloliwe le nqaba lisondele kakhulu ukuba station. Ungafumana kuyo evela Tours, isixeko enkulu kufutshane ngokufanelekileyo enqabeni yomkhosi.
Nantes ukuba Tours Uqeqesha
Lille ukuba Tours Uqeqesha
2. Chateau yaseChantilly
Ise Chantilly Estate, le nqaba ulingana utyelelo okunene xa ubona ukuba ibukeka njani. Yinto kufutshane nombindi Paris leyo eyenza abahamba kuyo yomoya.
3. Ibhotwe leFontainebleau
Ewe, ukuba entsha isigodlo, kodwa ukhathalela, ukuba buhle! bamakhela Fontainebleau emva kule 12th ngekhulu, kwaye kunjalo ubukeka obukholekayo zigcinwe kakuhle. Kwakhona lula ukuhambela. Uyakwazi ukufikelela kuyo eParis e ngaphantsi kweyure kunye Transilien umgca R.
Ungafumana le nqaba langa ngaphakathi park emvelo kuzwelonke kunjalo ngaphandle kweParis. kunjalo, ngokundwendwela eli inqaba entle loliwe is a bit olukhohlisayo njengoko kukho kuphela kweshatile ukuba uhamba ngqo kulo. Ubuncinane ungakwazi ukunandipha train ride ku Paris!
EStrasbourg to Paris Uqeqesha
Zurich to Paris Uqeqesha
Chambord Castle i inqaba mesmerizing ngokwenene yaye kwabangela ukuba kuluncedo ukuhambela. Ukuze ufumane kuyo, kuza kufuneka iteksi okanye isiphekepheke ukusuka kwidolophu Blois. kunjalo, wafika Blois iyanikezwa ukusuka kwizixeko ezininzi France. Ungafumana kuyo ngaphantsi kweyure enesiqingatha xa uhamba eParis.
Inqaba Amboise phakathi zakhe ezinde ezinhle kakhulu eFransi. Yinto isacholo ngokwenene lwezakhiwo evela Renaissance. Unga zifike Chateau ngokulula ngololiwe ukusuka kwizixeko ezininzi eFransi nge a TGV okanye Umzila oololiwe.
7. Inqaba eyaziwayo yeChateau de Monte-Cristo
Sincoma kakhulu le cute, enqabeni encinanana odumileyo Alexandre Dumas wayakha! Ungakwazi ukufikelela Monte Cristo Castle lula ngomgca uloliwe engingqi njengoko oko ilungile eParis! Unoko engqondweni, ungakwazi ukuthatha nayiphi na uloliwe xa wena uvela kwenye indawo ethile.
8. Inqaba emangalisayo I-Chateau d'Azay-le-Rideau
It is a inqaba encinane nkulu ngokwenene kwakhiwa ekunene kwi siqithi ngaphakathi echibini elincane! Alinako ukufumana nayiphi asemahle ngaphezu koku. Ungafumana enqabeni yomkhosi lula ngokuthatha isiqingatha uhambo iyure emzini Tours. Emva koko kuza kufuneka nje ukuba wenze imizuzu eyi-20 ukuya enqabeni kuwe.
9. IChateau du Haut-Koenigsbourg
Isenokuba kuba phakathi iinqaba ezinhle kakhulu eFransi, kodwa kwakufuneka ukuze ulifake. Le nqaba i esisityebi kwimbali, kwaye ngokwenene obumangalisayo, nje kuphela indlela yayo umtsalane! Lo loliwe sesikhululo esikufutshane enqabeni yomkhosi na Selestat, kwaye unako ukufikelela kwi eStrasbourg okanye ezinye izixeko ezininzi ezikufuphi.
the Chateau de Pierrefonds Akuthandabuzeki ukuba efanelwe yokuba kuluhlu malunga iinqaba ezinhle kakhulu eFransi. Unga ukufikelela kuphela inqaba ngokuthatha uloliwe ukuze Compiegne, ke ukuthatha ibhasi ukuba Pierrefonds.
Ukuba ufuna ulwazi oluthe vetshe uhambo ngololiwe 10 Charming Castles In France By Train, Unga uqhagamshelane nathi ngokusebenzisa site yethu.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-castles-france%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Iinqaba europetravel Travel travelfrance
Izixeko Best EYurophu For inyama
Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe eSpain, Uloliwe eSweden, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe